Sary nalaina teny Ivato nandritra ny fahamaizana hotely kintana dimy! | Hevitra MPANOHARIANA
Mankasitra Jentilisa a! Toy ny mba nanatri-maso teny koa ny tena mahita ny tatitra ataonao. Isan'andro mantsy dia tazan-davitra fotsiny no atao.
Nampidirin'i Belle @ 23:08, 2008-12-22 [Valio]
Misaotra anao mitondra ireto vaovao sy sary momban'ny fahamaizan'ny hotely Kintana dimy.
Toy ny eo akaikiny mahita na'izany mihintsy izahay izao.
Mirary soa hatrany...
Nampidirin'i mangamaso @ 10:52, 2008-12-23 [Valio]
mafinaritra be na ny mamaky azy aza.
Otran'ny hoe manao coverage an'ny intifada izany elah haha ;-)
Nampidirin'i simp @ 15:06, 2008-12-23 [Valio]
ary misy gastro pizza kay eny Talatamaty an :)
sao dia tao toi no nikaly atoandro :P
Nampidirin'i simp @ 15:08, 2008-12-23 [Valio]
tsy maintsynody koa! fa efa Ivato io ka
Nampidirin'i jentilisa @ 20:06, 2008-12-23 [Valio]
mankasitraka tatnteraka e . tena mahaliana mihintsy , tsara fa tohizo hatrany fa tandremo ihany anefa ny rsque be loatara na de izany aza.
Nampidirin'i Ruddy @ 16:03, 2008-12-24 [Valio]
misaotra e! mety ho tonga @ vohitry ny adalana ihany isika gasy raha mitohy ny tranga toy izao
Nampidirin'i manakasina @ 15:08, 2008-12-25 [Valio]